Gacaladeey haddaan guursaday ma gef baan galay?! Q1AAD - SomaliNet Forums
Postby libaaxyare » Fri Jul 24, 2015 10:43 am
Qeybta labaad coming soon.......................
Re: Gacaladeey haddaan guursaday ma gef baan galay?! Q1AAD
Postby Libix » Fri Jul 24, 2015 4:18 pm
lol alla beerjilicsanaa
Postby Bella18 » Fri Jul 24, 2015 5:04 pm
Qaybti labaad la soo dhaqso
Postby HorseedS » Fri Jul 24, 2015 5:27 pm
Re: Gacaladeey haddaan guursaday ma gef baan galay?! Q2AAD
Postby libaaxyare » Fri Jul 24, 2015 7:01 pm
Alla maxaan isbadalay markaan maqley ereyga FURRIIN! Wajigeyga ayaa doorsoomay, oo naclad iyo nacayb daboolay.
Waxaan isweydiiyey; waxa ka keeney in Mahad uu ku taliyo in aan aqalkeyga dumiyo!
Anoo og in ay tahay tallaabo aan la hurayn, ayaan iska maahiyey, kana maagay, oo isku dayey inaan gadaal u dhigo, celiyo ama aan ka hortago, haddana, haddii waqtigu ku ciilayo ama kaa hiillinayo, fariid walba oo aad tahay, waxaad noqon nacas iyo doqon aan tabar lahayn, oo aan taako buuxin karin! Furriin ayaa loo yimid, arrintuna waxay dhaafi waysay in aan furo Mudan, kuna furo hal DALAAQO! Haddii furriinkii ku dhacay rabitaankeenna oo lalaalay awgii, xiriirkeennii ayaan u sii wadannay, si aan isugu soo laabanno marka jawigu dego, buuq la’aan!
Naf wax jecel iyo lammaane is raba, labadaba lama loodiyee, Mudan waxaan soo ceshtay 14 cisho ka dib.
Haba soo ceshan lahaydaa! Malintaan ku laabtey ayaa waxaa dhacey, wax aanan fileyn qorshahana ku darsan.
Waxaan goor subax ah ka soo tagey gurigeyga, waxaanna ku sii jeedey goobta shaqdayda. Waxaan arkey gaari miraayado madow ku xiran yihiin, oo aan loo jeedin waxa dhexdiisa ku jira dad iyo duunyaba.
Gaariga waxaa ka soo dagey Mudan abtigeed iyo walaalkeed. Seeddigey oo xiran tuute qorina sita, ayaa wuxuu igu amrey inaan raaco gariga.
“Mar baan dhiman, ee dhaqso, walaashaa asaay u saar!” Waa uu sii xanaaqey, ka dibna igu afuufay xabbado, afarta jihana iiga furay rasaas.
Waan wareerey. Waxaan garan waayey jiho leyga jiro. Xabbadihii uu igu furay, waxay dhexmareen qaarkood dharkii aan watay, oo ay duleelsheen. Ayaan wanaag waxba ima yeelin, oo Ilaaheey amarkii wax ima gaarsiin, xagatinba ha ahaatee, waana ka badbaadey Alle ayaanna uga mahadceliyey.
Aniga dhan waxaa i qariyey, boor iyo habaas oo qofka i hortaagan iyo anigu aan is arki waynnay, maxaa yeelay, waxaa is qabsaday uuro iyo bito.
Waa waqtigii iigu adkaa, ee i soo mara intii aan noolaa. Maalintaa maalin iiga madow ima soo marin abid.
Waa laba qodob oo is qaadan, haddana, la isku qoofalay. Si kan hore loo hirgalsho, waa in kan dambe laga hormarshaa.
Waa waalli cad iyo wehel la’aan.
Waan qaadan waayey, anoo Mudan jeceyl, iyana ay i jeceshahay inaan wada noolaa waynnay.
Wax badan baan maqlay wiil gabar laga furtay ama gabar wiil laga furaye, maantase aneey igu godlan tahay!
Haddaad gabar guursaday gacalkeey ah, in qabyaalad qayaxan la iiga furto, iyana waan qaadan waayey.
Qalad kuma lahan waalidkeey iyo walaalkeey, oo waxay fiirinayeen nafteyda iyo ammaankayga, balse, isu geyn, gunnimo ka weyn miyaa jirta: gacalladaa guurkeedu inuu gef noqdo!
Postby Bella18 » Sat Jul 25, 2015 8:17 am
Oo maa sidaasa lagu kala tagay?
Baxar Baan Galay
by Advo » Sat Nov 17, 2012 7:20 am » in General - General Discussions
LOOOL ''Haddaan Moodaayo''
by KingWaslawi » Fri Apr 26, 2013 6:32 pm » in General - General Discussions
Adeer cabudullahi yuusuf oo guursaday
by shaamboo » Tue Mar 18, 2008 12:24 pm » in General - General Discussions
2 dayeer uu is guursaday 2 monkeys married eachother
by The_Emperior5 » Tue Sep 09, 2008 2:59 pm » in General - General Discussions
Colley Haddaan Maqlo, Iyadaan Cunaa!!
by kambuli » Wed Jan 20, 2010 12:01 pm » in General - General Discussions
Abgaal iyo Mareexaan is guursaday maxay dhalaan ?
by fanaanYG » Tue Dec 20, 2016 6:46 am » in General - General Discussions
Ogaadeen haddaan ahay﻿ dad wow,amar korreeyaaye
by Eaglehawk » Tue May 15, 2012 12:33 pm » in Ogaden - General Discussions
Gabayguu tiriyey ninkii Afxame guursaday
by LAFO-LAFO » Wed Sep 26, 2007 10:36 am » in General - General Discussions
Gabar Soomaaliyeed oo nin gaal ah diintiisa ku guursaday
by Bro » Mon Dec 17, 2012 8:38 pm » in General - General Discussions
Haddaan OGAHAY inuu wacadka ilaalinaayo... Ma OOYEEN !!!!!!
by Daanyeer » Fri Dec 23, 2005 10:19 am » in General - General Discussions